သက်တန့်ချို: အပြောင်းအလဲတိုင်းကို ကြိုဆိုသင့်ပါသလား ? (*****Special Blog Post *****)
Posted by သက်တန့်ချို at 10:34 AM
သဘောတူပါတယ် ရေးထားတာကအတည်ပေမဲ့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိယ်တခွိခွိရယ်သွားပါတယ် နယ်ကား
တွေကိုကြည့်ပါက ရိုက်မယ်...ထိုးမယ်...ဖဲ့ မယ်ဆို
တာကြီးပါပဲ မြန်မာကားတွေကိုယ်တိုင်ကိုက အတုယူမှား
အဟီးး) အင်းတစ်ချို့အပိုဒ်တွေတော်တော်သဘောကျပါ
ဒီပိုစ့်မှာစာရေးသူရဲ့ စေတနာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်း)
အပေါ်ကအပိုဒ် ယောကျာ်းကောင်းနဲ့ မိန်းမပျက်ကို
မိုးယံ September 27, 2010 at 11:23 AM
ယောင်္ကျားလေး အများစု ( အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) တစ်ခုခုကို လိုချင်ပြီဆိုရင် အသည်းအသန်ကြိုးစားပြီး တကယ်တမ်းလက်ထဲ ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ ရိုးအီသွားတတ်ကြပါတယ် ။ မိန်းကလေးရဲ့ အပျိုစင်ကိုရယူပြီးတကယ်လည်းရရော လက်မှမထပ်ရသေးတာပဲ ဆိုပြီး တခြားတစ်ယောက်ကို ပြောင်းဖို့ ၀န်မလေးတတ်ကြပါဘူး ။ ဖတ်ဖူးတဲ့ ရှေးစာအုပ် တွေအရ ကျားဆိုတဲ့ သဘာဝဟာ ဘယ်တော့မှ မိန်းမတစ်ဦးနဲ့ တင်းတိမ်လေ့မရှိဘူးတဲ့ ။ ကြောက် စရာကြီးပါ ။
အဲဒီလို ကောင်လေးတွေပဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အတွေ့များနေတယ်။ ကိုသက်တန့် စေတနာတွေက တော့ စာထဲမှာ အဖွေးသားမြင်နေရတယ်။ ထို့အတူ နန့်နန့်တက် မိကဲတွေကလဲ အများကြီးဗျ အခုလို စေ့စေ့စပ်စပ်ပြောပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မလုံလောက်ဘူးကို သက်တန့်ရေ။ မြန်မာပြည်က စုံတွဲတွေ ဖတ်မိ လိုက်နာမိရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့လေ။ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ဘယ်လိုပဲ ၀င်ရောက်လာလာ ငါဘာလဲ သိနေသင့်တယ်။ ဒါလိုမဟုတ်ရင် အမျိုးပျောက် သွားမှာပါ သတိထားသင့်တယ်။ ခေတ်မှီတာရယ် ခေတ်လွန် တာရယ်။ တိုးတက်တာနဲ့ ဆုတ်ယုတ်တာကို ခွဲခြားသိသင့်နေပါပြီ။ ကိုသက်တန့် ဒီပို့စ်လေးကို သေချာပြန်ဖတ်ပြီး အတွေးနယ်ချဲ့လိုက်ဦးမယ်ဂျာ။
နေ့အိပ်မက် September 27, 2010 at 11:55 AM
အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးတာကြည့်ချင်ရင် အခွေဝယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်၊ ဘယ့်နှယ် မြဝတီနဲ့ မြန်မာ့အသံကို နေရင်ထိုင်ရင်း.......
nyeinsoe September 27, 2010 at 12:26 PM
ကောင်းသော အပြောင်းအလဲ ကို ကြိုဆိုမိပါတယ် ..
မိန်းမပျက်တော့မသိပါ။ အခုခေတ်က မိန်းမသွက်တွေကတော့အရမ်းများလာတာ အမှန်ပဲ။ အခုခေတ် ဆယ်ကျော်သက်မိန်းခလေးတွေ အရမ်းလက်သွက်တာကိုတော့ မြင်နေရပါတယ်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း September 27, 2010 at 8:17 PM
မိန်းကလေးအပျိုမစစ်ရင် တန်ဘိုးမရှိသလောက်ထင်တဲ့ အာရှ အထူးသဖြင့် ဗမာတွေ အယူအဆကို ဒီကလူတွေ နားမလည်ကြပါ ..သူတို့ကလဲပြောပါတယ် နင်လဲလူပျိုမစစ်ရင် နင်လဲတန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့တဲ့ ..ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်သား..သဘာဝက ဖန်တီးပေးတဲ့ လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်မှာ ကိုယ့်ကြသာစေ သူ့ကြနာစေဆိုတဲ့ အာရှသားတွေအတွေးအခေါ်ကိုသဘောမကျတာအမှန်ပါ.. အဓိကကတော့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာနားလည်မှုရှိဖို့..အိမ်ထောင်မကျခင် လိင်ဆက်ဆံကြတဲ့အခါ အန္တရာယ်ကင်းအောင် ကွန်ဒွန် သုံးကြဖို့၊လင်ဆိုးမယားတဖါးဖါးဆိုပြီးတသက်လုံးကြိတ်မှိတ်စိတ်ညစ်ခံမနေပဲ ဘဝကို ရဲ၇ဲရင့် ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်..ခက်တာက ဗမာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက နိုင်ငံတကာနဲ့ မဆက်ဆံဖူးပဲ တခါးပိတ်နေတော့ ဒီခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုမှလွန်ဆန်နိ်ုင်မယ်မထင်
Dr. September 28, 2010 at 10:37 AM
သက်တန့်ချို September 28, 2010 at 10:41 AM
ရပါတယ်ခင်ဗျာ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ share လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
၄၊။ ကောက်ကျစ်သော ယောကျာင်္းနဲ့မအူမလည်မိန်းမ
Digital ခေတ်တွင် Hand ph (သို့ ) i pod များဖြင့် အတူနေပုံကို မှတ်တမ်းတင်ကာ Internet သို့ တင်ခြင်း သို့ဟိုကို ပို့ မယ် ဒီကိုပြမယ် ခြိမ်းခြောက်ကာ ခိုင်းစေခြင်းများ ခေတ်စားနေပါသဖြင့် မအူမလည်များ ပိုဒုက်ခ ရောက်ရပါသည် ။
Internet cafe များတွင် အလကားတင်သွားခြင်းများလဲ ရှိနေပါသည် ။
ကိုကိုးအိမ်(မန္တလေး) October 3, 2010 at 7:36 PM
ကိုသက်တန့်ရေ တကယ်တမ်းက ဇာတ်ကားကြည့်သူ တွေအင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးမကြည့်တာက သူတို့အပြစ်ပါ။ မြ၀တီနဲ့ မြန်မာ့အသံဟာ လူတိုင်းအဆင်ပြေပါစေ ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ ပြန်ဆိုပေးတာပါ။ အဲလိုပြန်ဆိုပေးရာ မှာ လူကြီးလူငယ်တောသူတောင်သားအဆင်ပြေအောင် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကပိုပါတယ်။ အဲဒါကို တစ်ဖက်သတ် ဘာသာပြန်ပေးသူတွေကိုပဲ ပြောသလိုကြီးဖြစ်နေသလားလို့။ ဒီလိုပြောလို့လည်း စိတ်မဆိုးစေချင်ပါဘူး။ နောက်ပြီး အခုလက်ရှိ တော်တော်များ အကျင့်ဖောက်ပြားကြတဲ့ မှောက်မှားမိကြတဲံ ယောကျားမိန်းမတွေထဲမှာ တော်တော်များများအမြင်မတော်တာတွေတွေ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဆိုတာမျိုးက ပြောရလည်း အခက်သားကလား။ ပြောလို့အကောင်းမမြင်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတာ ယောကျားသာမက မိန်းမတွေကောပါ။ အဲဒီတော့ ကိုးတို့လည်း ဘေးကပဲထိုင်ကြည့်နေလိုက်ရတော့ တာပါ့ဗျာ....
နေ့အိပ်မက် October 4, 2010 at 3:55 PM
လက်မထပ်ဘဲ တူတူနေတာကို တအားကြီးကောင်းတယ်လို့ မပြောချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်အရာမဆို နှစ်ဖက်မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနှစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဦးစစ်မင်း (TTCရွာသား) February 24, 2011 at 2:49 AM
အားလုံး က နွေးဆွေး ကြတာ ပြည့်စုံနေတော့ ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး... ကျွန်တော်ကတော့ ကိုသက်တန့် ချိုပြောသွားတဲ့ Love နဲ့ sex ကို ခွဲခြား ပါဆိုတဲ့ စကား စု ကိုနှစ်သက်တယ်..။ အကို ပြောသလို ပဲ ခုခေတ် က အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာ.. ခက်တယ် ဗျာ ပြောမရဆိုမရလေးတွေ အတုမြင် အတတ်သင်တွေ..။ပြီးတော့ အတုယူမှားစေတဲ့ မြန်မာ ကားတွေ ... ဘာအနှစ်သာရ မှ မရှိ ဘာဖော်ကျူးမှု့ မှ မရှိတဲ့ ကား (များသောအားဖြင့်).. ရိုက်လိုက်သော ဇာတ်ကားတိုင်း ဟာလဲ ပြင်ဦးလွင် မှ မလွတ် .. ဇာတ်ညွှန်းတွေကလဲ အချစ် အိမ်ထောင်ရေး လင်မယားကွဲ နောက်ဆုံးသေ ဒါတွေနဲ့ ပတ်လည်ရိုက်နေတယ်..။ ပြောချင်တာကတော့ပြောင်းလဲလာတာတွေ ကို သေချာ ထိန်းမတ်ပြုပြင်ရင်း ကြိုဆိုသင့်တာတော့ ကြိုဆိုရမှာပေါ့... မပြောင်းလဲတဲ့ ဇာတ်ကားများကို လဲ ပြောင်းလဲ စေချင်ပါတယ်..
အချစ်ဆိုပြီး sex ကိုကျူးလွန်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့
ငယ်သွေး February 16, 2012 at 1:33 PM
ဒီနေ့ ခေတ်ကာလ မှာ အဲလို Living together ကိုပဲ သာမန် ကိစ္စ တခု လို သဘောထားနေတာ တွေ တွေ့နေရတယ် ကိုသက်တန့်ရဲ့ စာကို သူတို့တွေကို ဖတ်စေချင်တယ် သိလား အသိတရား တခုခု ရသွားစေချင်တာပါ အခု လို လူသားတွေအတွက် အကျိုးပြုစာတွေ ရေးပေးစေချင်တယ် ကျေးဇူနော်
၂ ။ ဇတ်လမ်းတွေထဲက ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လက်ခံသင့်ပါသလား ? esp: Premarital Sex or Living Together
အဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ်တိုင်လဲ တခြားသူတွေနဲ့ ပြောဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုခေတ်မှာ Value Change ဖြစ်လာခဲ့ပြီပဲဆိုတဲ့ အဖြေကို မကြာခဏရခဲ့ဘူးတယ်။ Value change ဖြစ်လာပေမယ့် ကိုယ့်မြန်မာမလေးတွေ အထူးသဖြင့် ဘာကိုမှ သေချာမဆုံးဖြတ်တတ်သေးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေနဲ့ ၂၀ ကျော်စလေးတွေကိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကို တန်ဖိုးထားစေချင်တယ်။ Love & Sex က ရောထွေးမှုရှိတယ်ဆိုပြီး အများစုက ကန့်ကွက်သလိုနဲ့ လက်ခံကျင့်သုံးနေကြတဲ့အပေါ်မှာ ဒီနေ့ထိ ကန့်ကွက်ချင်နေတုန်းပဲ။ ကိုသက်တန့်ပြောတဲ့ ဒုတိယတစ်မျိုးထဲမှာပါလို့ထင်တယ်။ ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ရေစီးကြောင်းတွေ ဘယ်လောက်ပဲပြောင်းပြောင်း ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ့်ဘာသာတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံတဲ့ သူမျိုးတွေပဲ ဖြစ်စေချင်ခဲ့တယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ ရှားပါးသွားခဲ့ပြီဆိုတာလည်း ပြန်ပြန်ကြားရချိန်မှာ စိတ်မကောင်းဘူး။ ၂၀၁၂ သင်္ကြန်မှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးက EmOC pills လို့ နောက်ကြတဲ့အချိန်၊ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ စတင်တီထွင်ခဲ့သူက အဲသလိုမှ စဉ်းစားမိခဲ့ရဲ့လား.. misuse တွေပဲ လူတွေက လုပ်ကြတော့တာလားလို့ တွေးမိပြီး ရင်မောဘူးတယ်။EmOC pills အကြောင်းတွေ သူများကို ပညာပေး ရှင်းပြမိတိုင်း ငါများ Sex Promotion လုပ်မိသလိုဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့ အတွေးတချို့က ခြောက်လှန့်တယ်။ Love & Sex ကို ခွဲခြားခံယူမိသလို တော်တော်များများ အဲလို ခံယူနိုင်ပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းမိတယ်။ မဟုတ်ရင် ရောထွေးမိတဲ့အတွက် အပြစ်ဒဏ်တစ်ခုလိုနဲ့ ခံစားနေရတဲ့ သူတွေ ပိုပိုများပြီး ဆိုးကျိုးတွေ ပိုများလာမှာကိုလဲ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။